PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - I-ANC izokwethula izinhlelo esizenzile
I-ANC izokwethula izinhlelo esizenzile
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-30 - IMIBONO - THEMBA NTSHINGILA
NGONYAKA ozayo ngoJanuwari 12, inhlangano ebusayo kuleli i-African National Congress, izobe yethula izinhlelo zayo ngesikwenzile ukuthuthukisa umphakathi nalezo ehlele ukuthi izibandankanye kuzona ngokuhamba kwesikhathi ngenhloso yokuthuthukisa isizwe.
Lo mbuthano odume ngeJanuary 8 Statement wangonyaka ozayo, uzobe ubanjelwe enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini.
Le nhlangano izobe ihlanganisa iminyaka engu-106 igubha usuku eyasungulwa ngalo okungu-1912.
I-ANC yasebenzisa lo mkhankaso wayo okokuqala isesekudingisweni ngo-1972.
Njengoba kuza lo mbuthano wayo eThekwini, inhlangano iphansi phezulu igqugquzela abalandeli bayo ukuthi batheleke ngobuningi bayo ukuzolalela ebaphathele kona.
Kuzoba ngokuqala ngonyaka ozayo ukuthi lo mbuthando kukhulume kuwona umengameli omusha wale nhlangano okunguMnuz Cyril Ramaphosa.
Kuzokhumbuleka ukuthi owayenguMengameli wale nhlangano uMnuz Jacob Zuma, nguyena ogcine ukwethula inkulumo iJanuary 8 Stament njengomengameli wale nhlangano embuthanweni walolu hlobo obuse Orlando Stadium eSoweto, eGauteng.
UZuma ushiye ekubeni umengameli wale nhlangano ngoDisemba emva kokuthi kube nenkomfa yokukhetha ubuholi be-ANC owawuseNasrec eGoli nyakenye lapho okwaphumelela khona uRamaphosa.
Wehlula imbangi yakhe uNkk Nkosazana Dlamini Zuma owayethwelwe ngeqoma ukuthi kungase kube nguyena ozodla ubhedu lokuba umgengameli wale nhlangano.
UZuma ushiye ekubeni umengameli wale nhlangano emva kokuphela kwehlandla lakhe lokugcina, obekungelesibili.
Phezu kokuthi sekukuningi osekushiwo ngalo mbuthano ozokuba seThekwini okubalwa kukho ukuthi uRamaphosa angase abhekene nekuhewulwa kwazise uzobe eKwaZulu-Natal okuyikhaya likaZuma lapho le nhlangano inabalandeli abaningi khona okukholakala ukuthi bangase bamphazamise, abahlaziyi bezepolitiki, bathi phansi amaphaphu, yinto leyo engeke yenzeke.
Umhlaziyi wezepolitiki uSolwazi Somadoda Fikeni uthe ngalo mbuthano i-ANC izobe itheleke ngobuningi bayo iqhamuka ezindaweni ezahlukene izokwakha ubunye.
“Akulula ukuthi bamphazamise uRamaphosa njengoba kuyiwa okhethweni ngonyaka ozayo,” kusho uFikeni.
Uthe bonke abaholi bale nhkangano bazobe belwela ukuthi kwakheke isithombe esihle sokuzwana phakathi kwabo.
“Bazofuna ukuthi babonakale njengabantu ababumbene kubalandeli babo ngoba ukuphazamisa uRamaphosa kungabalimaza okhethweni,” kugcizelela uFikeni.
Uthe ukusebenzisa kwale nhlangano uZuma ukuthi abe phansi phezulu eluleka abantu ngokuthi bangaphazamisi abaholi bale hlangano, yikona okuzoyisebenzela.
“Akumele bavumele ukuthi nanoma yimuphi umholi amukelwe ngokwendawo adabuka kuyo ngoba lokho kuyosho ubhebhezela indaba yobuhlanga,” kuchaza yena.
Phakathi kwezinto athe kulindeleke ukuthi uRamaphosa akhulume ngazo, ukubambisana, ukulwa nenkohlakalo nokuqinisa umkhankaso iThuma Mina.
Phakathi kwezinto athe uRamaphosa uzokhuluma ngazo, yimfundo yamahala, nokuthi izinkinga ezikhona esikhungweni esixhasa abafundi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) zizoxazululwa kanjani.
“Uzokhuluma nangokubuyiswa komhlaba ukuze kungabi sengathi yizinto ezaziqhamuke
noZuma zaseziyashabalala,” kusho uFikeni.
Umhlaziyi ozimele wezepolitiki wesikhungo uXubera Institute uMnuz Xolani Dube, uhambe emazwini kaFikeni.
“Angiboni bengamenzela phansi uRamaphosa. Ukusebenzisa kwabo uZuma kubasebenzele kakhulu ukuthi bakhe isithombe sookuba munye,” kuchaza uDube.
Uthe naye uZuma uzobe efuna ukukhombisa ukuthi umsebenzi wakhe uwenze kahle wokugqugquzela ukubambana kwamalungu ale nhlangano njengoba imsebenzisa ukuthi enze kanjalo.
“UZuma uzofuna ukubonakala enze kahle futhi eyakhile inhlangano,” usho njalo.
NgokukaDube, akungatshazwa ukuthi uma kumenyezwa igama likaZuma, kuzohlokoma inkundla njengoba esendaweni enabalandeli abaningi bale nhlangano futhi abemesekayo.
Uthe uZuma uzakhele ugazi olukhulu kubalandeli kwazise ukudla umdlalo ichess, nakho kube nomthelela wokuthi ezinye zezinto azimezezele esezoshiya, uzisho ngoba efuna ukuthi athi ehamba, kube sengathi nguyena ozinzile.
“UZuma washiya ememezele izinto eziningi kodwa engazange achaze ukuthi imali yokuzenza izovela kuphi nokuthi zizokwenziwa kanjani,” usho kanje uDube.
Echaza ngalolu suku ukuthi ngabe lubaphatheleni abantu bakuleli, uthe akukho simanga esilindelekile okunye okuhlukile kunalokhu le nhlangano ehlale ikusho minyaka yonke.
“Kuzobe kuseyilezo zinkulumo ezejwayelekile okuzothnjiswa ngazo abantu okuthile kodwa uma usulandela ukuthi ziyenzeka yini, ungaboni mehluko,” echaza.
Uthe uma uzilandela zonke lezi zinkulumo zeJanuary 8 Statement, zisho into eyodwa kodwa engayi ndawo.
“Ozokubona ngokuhamba kwesikhathi kwenzeka uma uRamaphosa esyithulile inkulumo yakhe, ukwanda kwezigameko zenkohlakalo ezizoholela ekudonseni kanzima komnotho wakuleli,” usho njalo.
Wenze isibonelo ngokuthi ukuncishiswa kwezinga lokungasebenzi kwabantu yinto okuhlale kukhulunywa kulo hlobo lwemibuthano efana nalena kodwa uthole ukuthi kunokuthi isimo sibe ngcono, siba sibi kunakuqala.